Labo dhalinyaro soomaali ah oo la dilay mid kalane waa la dhaawacay south afrika#aqriso magacyada | Xaqiiqonews
Labo dhalinyaro soomaali ah oo la dilay mid kalane waa la dhaawacay south afrika#aqriso magacyada
laba dhalinayaro soomaali ah ayaa lagu dilay south afrika gaara ahaan xaafad yar oo ku taal duleedka magaalada Joohanesbeek(johennesburg) .
goobjoogayaal ku sugan south afrikca ayaa soo gaarsiiyey shabakadda xaqiiqonews magacyada raggan la dilay oo ahaa ganacsato ka shaqeyn jirtay dukaan ku yaala xaafaddaas.
mid ka mid ah ragga la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cabdweli cabdulaahi cismaan halka kan kalane magaciisa lagu soo goobay warsame maxamuud.
Alaha u naxariistee labadani dhalinayarada ayaa ka mid ahaa seddex dhalinyaro ah oo ku sugneed dugaanka xilliga weerarka dhacaayey iyadoo labadani la dilay ka sogow goobta uu dhaawac ka soo gaaray nin lagu magacaabo maxamed salaad oo ragga la dilay kula sugnaa goobta.
waxaa south afrika sii soconaya dilalka loo geysto dadka ajaanibta ah gaar ahaan soomaalida mana jirto dilkani ugu danbeeyey cid loo soo qabtay ilaa hadda sida xaqiiqonews ay u sheegeen goobjogayaal ku sugnaa xaafadda uu dilka ka dhacay.